Maxaad iska diiwaan gelisaa FEMA haddii aad caymis ku jirto | Nashville VOAD
Haddii aad la kulantay khasaare duufaanno ba’an iyo daadadka ku dhuftay degmooyinka Davidson, Williamson iyo Wilson Maarso 25 – Abriil 3 oo aad sugayso dejintaada caymiska ka hor intaadan codsan FEMA, ha sugin in ka badan sababtoo ah weli waxaa laga yaabaa inaad ku jirto u qalma kaalmada dawladda dhexe. Sababta kale ee aadan dib u dhigin codsiga: kama dambaysta diiwaangelinta FEMA waa Luulyo 7, 2021 .
Sababaha guud ee FEMA waxay ku dhiirigelisaa xitaa kuwa caymisku leeyahay inay isdiiwaangeliyaan:
Waxaad heshiis ka heshay shirkadda caymiska, laakiin ma daboosho dhammaan khasaarahaaga. FEMA waxa laga yaabaa inay ku caawiso baahiyaha aan la daboolin.
Waxaad dhammaysay xadkaagii siyaasaddaada ama dejinta Kharashaadka Nolosha ee Dheeraadka ah (ALE ee isticmaalka luminta) ama siyaasaddaadu kuma bixiso guryaha ku meel gaadhka ah oo gurigaagu aad buu u dhaawacmay in lagu noolaado.
Dejintaadu ma bixiso kharashyada la xidhiidha musiibada, sida caafimaadka ama ilkaha, gaadiidka, iyo kharashyada kale ee la xidhiidha musiibada.
Haddii aad jeclaan lahayd inaad kala hadasho khabiirka FEMA xaaladaada caymiska ama aad qabto su’aalo kale oo ku saabsan caawinta FEMA, wac khadka caawinta FEMA 800-621-3362 (TTY 800-462-7585 ). Khadka Caawinta ayaa ah agabka aad u tagi karto si aad jawaabaha su’aalaha ku saabsan codsigaaga ama FEMA u cusbooneysiiso xaaladaada guri ee hadda. Khadadka waxay furan yihiin maalin kasta laga bilaabo 6 subaxnimo ilaa 10 galabnimo Waqtiga Dhexe. Haddii aad isticmaasho adeegga gudbinta, sida taleefoonka fiidyaha, InnoCaption ama CapTel, ku cusboonaysii FEMA lambarka gaarka ah ee adeeggaas loo qoondeeyay.
Waxa kale oo aad isticmaali kartaa khadka caawinta si aad u codsato caawimo. Siyaabaha kale ee loo codsado waa iyada oo loo marayo mareegaha ọdachi .
Hadafka FEMA waa caawinta dadka kahor, inta lagu jiro, iyo ka dib masiibooyinka.